February 8, 2020 - CeleLove
February 8, 2020 CeleLove 0
ခြေချောင်းလေးတွေက ပြောတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ချောင်းခြင်းစီက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါရဲ့လား..? ခြေချောင်း ပုံသဏ္ဍန်အနေအထားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ခြေထောက်အဖျားပိုင်းရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို ရောမပုံစံ၊ လေးထောင့်ပုံစံ၊ ဂရိပုံစံနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပုံစံ […]
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ၊သတိပြုရန် ၊ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ၊သတိပြုရန် ၊ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက် နေ့မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ကို မိတ်ဆွေများအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် […]
သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ကြွေးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အမေ့ရဲ့သားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သားပြန်လာပါရစေ
သံသရာအဆက်ဆက် ဝဋ်ကြွေးကုန်လို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ အမေဝမ်းထဲက အမေ့ရဲ့သားလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သားပြန်လာပါရစေ ကျေနပ်တယ် အမေ…သား ကျေနပ်တယ်။ လောကအလယ်မှာ အမေရဲ့ သားလေးအဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့လို့ … လောကကြီးက မျက်နှာသာမပေးတော့ အမေဆိုသော … အမေတစ်ယောက်နဲ့ အတူရှင်သန်ခွင့်မရတာကိုတော့ သားဝမ်းနည်းမိတယ် … မငိုပါနဲ့ အမေ သားလာလမ်းကို အမေမှန်းဆပြီးလွမ်းနေပါ နောက်နှောင် […]
ရွှေတိဂုံဘုရား ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေသော (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
ရွှေတိဂုံဘုရား ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးနေသော (ဗွီဒီယိုဖိုင်) ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ဗွီဒီယိုဖိုင် မကြည့်ခင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးကို ဖတ်သွားလိုက်ပါအုံးနော် …။ ၁၈၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ရဟန်းပညာရှိ၊ ပုဏ်ဏ္ဍား ပညာရှိ၊ လူပညာရှိ တို့ဝိုင်းဝန်း ရေးသားပြုစုခဲ့သော မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်တော်ကြီး၌ ဖော်ပြချက်အတိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကို […]
ယောက်ျားလေးများ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁) အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ …။ (၂) မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ …။ (၃) ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို […]
မူကြို ဆရာမအား ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးမှ ပန်းကန်ပြားဖြင့် ပစ်ပေါက် သဖြင့် ဒါဏ်ရာရသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်
မူကြို ဆရာမအား ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးမှ ပန်းကန်ပြားဖြင့် ပစ်ပေါက် သဖြင့် ဒါဏ်ရာရသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် မူကြိုဆရာမအား ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှ ပန်းကန်ပြားဖြင့်ပစ်ပေါက်သဖြင့် ဒါဏ်ရာရသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် အပြည့်အစုံ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လူငယ်တစ်ဦးအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိသဖြင့် ရှိ/မရှိ စဝ်စံထွန်း​ဆေးရုံတွင် ​စောင့်ကြည့် စစ်​ဆေး​နေမူကြိုဆရာမအား ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှ ပန်းကန်ပြားဖြင့် ပစ်ပေါက်သဖြင့် ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ် …။ […]
ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား Facemask တွေဝင်နေပါတယ်….
ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား Facemask တွေဝင်နေပါတယ်…. ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား facemask တွေဝင်နေပါတယ် …။(မိတ်ဆွေများ အထူးသတိထားကြပါ) ကြိုးတွေဝါနေပါတယ် …။ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးတာ သေသေသပ်သပ်မရှိပါဘူး …။ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ facemask ဝယ်တာ ရောဂါထပ်ကူးနေအုန်းမယ် …။ တစ်ခါသုံးကို ထပ်ခါထပ်ခါသုံးဖြစ်နေပြီ …။ Mask ၀ယ်တဲ့အစာ […]
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရေစက်ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အနားကို အလိုလို ရောက်လာမှာပါ
ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရေစက်ရှိတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အနားကို အလိုလို ရောက်လာမှာပါ ဘယ်လောက်နီးနီး ရေစက်ကုန်သွားတဲ့ သူတွေကတော့ ခွဲကြရဦးမယ် …။ ဘဝဆိုတာ … အရာရာစိတ်တိုင်းကျတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး …။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ …။ ဒုက္ခဆိုတာရှိလို့ သုခအမှန်ရှာရင်းနဲ့ သစ္စာကို ရှာတွေ့သွားကြတာပဲ မဟုတ်လား…၊ လောကနိယာမတွေက ရိုးရိုးလေးတွေးရင် ရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ် […]
ပိုက်ဆံချေးသူ၊ငှားသူနှစ်ဦးစလုံး အဆင်ပြေစေမည့် နည်းလမ်း…
ပိုက်ဆံချေးသူ၊ငှားသူနှစ်ဦးစလုံး အဆင်ပြေစေမည့် နည်းလမ်း… ကိုယ်အနားမှာ ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ချမ်းသာရင်သူငယ်ချင်းတွေ ချမ်းသာရင် ပိုပီတိဖြစ်တယ် ။ ကောင်းမွေးဆိုးမွေး ခံယူဖို့ပါ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ ချမ်းသာမှမဟုတ်ဖူး ဆင်းရဲလဲ မိတ်ဆွေပါဘဲဗျာ ကူညီပါတယ်။ ကတိတော့ တည်ပါ …။ ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ချေးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါ။ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို […]